'यतिबेला मेरो ध्यान आम नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित छ' यतिबेला आन्तरिक विमति वा समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न कसैले पनि मिल्दैन । मैले पहिले पनि भनेको छु, रोग र भोकबाट देशबासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार कुनै हालतमा पनि पछि हट्दैन । त्यसैले मेरो र मैले नेतृत्व गरेको सरकारको सारा ध्यान र संम्पूर्ण प्रयाश महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकको जिउधनको रक्षामा केन्द्रित... शुक्रबार, असार २६, २०७७
क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प? गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म, दीर्घरोगीले औषधि किन पाएनन्? जवाफ चाहिन्छ। कृषक, मजदुर, साना उद्योगी, ठूला उद्योगी, व्यवसायी... मंगलबार, जेठ २७, २०७७
मास्कको बकपत्र म जसको मुखमा जसरी बसे पनि उत्तिकै शोभनीय छु र तपाईंहरुलाई सुरक्षित बनाउछु। सोमबार, जेठ २६, २०७७
प्रधानमन्त्रीमा दक्षता छ, सल्लाहकार ठिक भएनन् श्रीलंकामा एकजना राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेललाई नियुक्त गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको पालामा गरिएको थियो। उनी त्यहाँबाट एक वर्षपछि फ... आइतबार, जेठ २५, २०७७
आरडीटी पोजिटिभले दिएको भय उक्त टेस्टमा मेरोबाहेक सबैको नतिजा नेगेटिभ आयो। तर मेरो आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना १२ गते नै केन्द्रीय प्रय... आइतबार, जेठ २५, २०७७
विलासी सरकारका 'अभिशप्त' नागरिक नागरिक झन् तनावमा पिल्सिएका छन्। खाद्यान्न अभाव छ। सरकार भने आफ्नो वाहीवाही खोज्दै हिँडेको छ। बौलाउनु भन्दा मर्नु बेस भन्दै जनता कोर... शनिबार, जेठ २४, २०७७
युट्युबकारिताबाट हायलकायल पत्रकारिता ठूलो हिस्साले सूचनाको स्रोत युट्युब बनाइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा बढी भन्दा बढीलाई हेराउने नाममा भइरहेका निकृष्ट हर्कतको हानी सञ्चार... बुधबार, जेठ २१, २०७७
कहिलेसम्म पाइएला र यी गाउँको माया? एउटा चर्चित भनाइ नै छ, युरोपमा कामको भर हुन्न, आज छ, भोलि छैन। कहिलेकाहीँ बढी काम हुँदा बोल्ने फुर्सद पनि हुन्न, काम छैन भने फुर्सद... बुधबार, जेठ २१, २०७७